Hatolotra ho fantatry ny rehetra amin’ny 19 janoary 2021 Ny 19 janoary 2021 no hatolotra ho fantatry ny rehetra na ny mpamatsy vola, na ireo mpampiasa vola na ireo sehatra rehetra hiaraka hanatanteraka ny asa ny Plan Emergence Madagascar na ny PEM.
vendredi, 18 décembre 2020 13:17
Tsenabe 4M : Misongadina amin’ity andiany voalohany ity ny fampiasana ny teknolojia vaovao
Tanterahina eny amin’ny Forello Expo Tanjombato nanomboka ny 17 Desambra 2020, ary hitohy hatramin’ny 20 Desambra ho avy izao ny Tsenabe 4M, na Madagasikara Mijoro-Miray hina-Mifaly, izay hetsika goavana mampivoitra karazana sampam-pamokarana maro hatramin’ny fisian’ny valan'aretina Covid-19. Hasongadina manokana amin’ity andiany voalohany ity ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin’ny alalan’ny fisian’ireo « webinaires » miaraka amina mpandraharaha efa matihanina manerana izao tontolo izao manodidina ireo lohahevitra misahana ny haitao vaovao. Ankoatra ireo dia hisongadina manokana ihany koa ny fampiroboroboana ny vokatra Vita Malagasy sy ny fandraharahana eo amin’ny tanora ho famelomana indray ny toekarena eto amin’ny firenena. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 18 décembre 2020 13:03
Toekarena manga : 103 000 taonina isan-taona ny trondro voajono amin’ny fomba tsy ara-dalàna eto Madagasikara
Misy ankehitriny ny famolavolana drafitra hiarovana ny morontsirak'i Madagasikara amin'ny jono tsy ara-dalàna, tsy voatatitra ary tsy voafehy - ary amin'ny fampiroboroboana ny toekarena manga an'i Madagasikara.
Notanterahina androany 17 desambra 2020, tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny famatsiam-bola mitentina 100 tapitrisa dolara avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena ho an'ny tetikasa MIONJO. Ny tetikasa MIONJO dia hiompana amin'ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra, indrindra ny fahazoan'ny vahoaka misitraka rano fisotro madio, any amin'ny faritra Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana. Ny tanjona dia hahafahan'ireo mponina any Atsimo hanana foto-pivelomana maharitra mba hahaleo tena ary handray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra. Laharam-pahamehana amin'ity tetikasa ity moa ireo vehivavy sy ireo tanora. (Jereo Sary Tohiny)
Raha tsy niasa efa nihoatra ny 7 volana ireo fiara karetsaka noho ny hamehana ara- pahasalamana, dia hatairana ny an'ireo tompona fiara karetsaka, fa fisondrotana pantanty indray no niandry azy ireo, nefa nanantena ny fanalefahana ny hetra alaina noho ny 7 volana tsy niasana.
mercredi, 16 décembre 2020 08:57
70%-n’ny Malagasy hisitraka rano ary 50% hisitraka jiro hatramin’ny 2023 : Fanambin’ny JIRAMA ny hanatsara ny kalitaon’ny tolotra sy hampandroso ny orinasa
Iaraha-mahita ny olana ara-drano sy jiro eto Madagasikara, raha latsaky ny 15% monja ny misitraka jiro, ary latsaky ny 30% n'ny Malagasy ny misotro rano madio, dia maro ny antony nahatonga izany taha ambany dia ambany izany. Eo ny lafin'ny fitantanana ny orinasa Jirama, izay nampiaka-nidina ny lentany, eo ihany koa ny tsy fahampiam-bola nanamboarana, nikarakarana, eny nanaovana fotodrafitrasa vaovao mihitsy manaraka ny filan'ny mponina, izay mitaky fotoana lava ny fanamboarana azy ireny, raha tsy hilaza afatsy ny tohodrano famokarana herinaratra fotsiny. Miova ihany koa ny toetrandro maneran-tany, mihamafana ny tany, mihena sy ritra ny rano, izay ilaina amatsiana ireo famokarana rano sy jiro amin'ny ampahany. Ny tontolo iainana mihapotika eto Madagasikara, vokatry ny doro tanety, ny teviala, ny tavy, ny tsy fambolena hazo hisolo ireo nokapaina, ny fanaovana harina fandrehitra na saribao.
Manolona ny fahasahiranana goavana sedrain'ny orinasa fitanterana an'abakabaka Air Madagascar, dia nanapa-kevitra ireo mpitantana fa ahena 50% ny karaman'ny mpiasa mandritra ny 3 volana, hatramin'ny volana marsa 2021. Nanomboka ny volana aprily 2020 no tsy nisy sidina intsony ny Air Madagascar, tsy misy vola miditra arak'izany, nefa ny fiara-manidina hofaina tsy maintsy aloa vola hatrany, ireo prestataires na mpanao asa ivelany, tsy azo ialana, omena vola hatrany, ny karama volana novambra efa tsy voaloa. Ankehitriny dia mbola mikatona ny sisin-tany malagasy vokatry ny Covid-19. Misy kosa ireo sidina fampodiana ireo tera-tany malagasy monina any ivelany, fa dia miantoka ny saran-dàlana mandroso sy miverina izy ireny.
Ny Orinasa fanamboarana sy fikojakojana sambo SECREN ao Antsiranana dia mandalo fahasahiranana, toa ny orinasa lehibe eto Madagasikara ihany koa, satria dia ireo sambo mpanjono vahiny ny mandrafitra ny 85% n'ny vola kirakirain'ny orinasa. Manaraka fenitra iraisam-pirenena anefa ny Orinasa, ka tsy afaka mikitika sambo, na manao fikojakojana, raha tsy hatreha-mason'ireo orinasa reniny amin'ilay motera, na kojakoja natao ilay sambo. Ny sisin-tany anefa mikatona vokatry ny valanaretina Covid-19, ka tsy afaka tonga arak'izany ireo mpanamarina ny asa vita. tsy nisy arak'izany ireo sambo vahiny mpanjono niditra namboarina tato anatin'ny Orinasa.
Novorian’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo, niaraka tamina mpikambana maromaro ao amin’ny governemanta tarihiny, androany, ireo mpisehatra rehetra tsy miankina amin’ny fanjakana voakasik’izany. Maro hoy ny Praiminisitra ny zavatra nodinihina nandritra ny fihaonana, fa ny zavatra roa lehibe nivaingana tamin’izany dia ny hitazomana ny fanapahan-kevitra efa noraisina mba tsy hampidina ny vidin’ny lavanila ary tsy hanovàna an’izany any amin’ny seranan-tsambo fanondranana. Ny faharoa dia ny fanatsaràna ny rafi-pitantanana ny sehatra lavanila. Nambaran’ny Praiminisitra fa efa napetraka tao Antalaha ny “Conseil National de la Vanille” (CNV), izay iombonan’ny fanjakana amin’ireo mpisehatra tsy miankina rehetra, ka hotohizana ao anatin’izany ny fandinihana ny mahakasika ny resaka fandriampahalemana.